Somaliland: Salaaddiinta Beelaha Somaliland Maxay Ka Yidhaahdeen Gunaanadka Shirkii Garxajis? - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Salaaddiinta Beelaha Somaliland Maxay Ka Yidhaahdeen Gunaanadka Shirkii Garxajis?
Madax-dhaqameedka Beelaha Somaliland oo ka mid ahaa Marti-sharaf lagu casuumay maalinta labaad ee Shirweynihii Beelaha Garxajis uga socday magaalada Hargeysa oo shalay la soo gebo-gabeeyey, waxaanay Salaaddiin kala duwan oo ka hadlay gunaanadkii shirkaasi muujiyeen aragtida uga soo baxday Shirkaas iyo War-murtiyeedka laga soo saaray.
Madax-dhaqameedkaas oo u badnaa Salaaddiin, ayaa halkaas ka jeediyey hadallo isugu jiray Duco, dardaaran iyo bogaadin ay ku bogaadinayeen beesha shirkaas qabsatay qodobbada ka soo baxay Shirkooda iyo waxyaabaha ay iskula afgarteen oo ay sheegeen inay iyaguna soo dhawaynayaan.
Suldaan guud ee Beelaha Habar-jeclo Suldaan Cabdillaahi Suldaan Cali, oo ka mid ahaa Salaaddiin tiro badan oo gunaanadkii shirkaa lagu casuumay, isla markaana hadallo ka jeediyey uu mid waliba kaga hadlay dareenkiisa ama aragtiisa ku wajahan Shirkaas Beelaha Garxajis iyo waxyaabaha ka soo baxay, waxaanu yidhi; “Marka hore waxaan u mahad-naqayaa Illaahay oo Tolkay ku soo rogay muwaafaqada khayrka qabta ku soo rogay iyo walaaltinnimada ay arkeen inay u baahan yihiin ee dabadeedna hawsha badan, kharashka badan iyo dhibta badan u soo maray ee gartay dantoodu intay ku jirto walaalnimo iyo wax-wada-qabsi.”
“Waxaan leeyahay Shirkaas aad qabateen iyo walaalnimadaa aad muujiseen, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay, waanan idiin hambalyeynayaa, Illaahayna ha idiin taamyeelo.. Anigu waxaan ahay Nin weyn oo Habar-jeclo iguma filna, Isaaq baa ila yar, waxaan u arkaa wax weyni inay ii kordheen aniga mar haddii Garxajis heshiiyey oo walaalladeey heshiiyeen.” Sidaa ayuu yidhi Suldaan Cabdillaahi.
Suldaanka guud ee Beelaha Subeer-awal Suldaan Xasan Suldaan Cabdillaahi Suldaan Cabdiraxmaan, ayaa isaguna halkaas ka hadlay, waxaanu yidhi; “Farxad wayn bay ii tahay, Sharaf wayna way ii tahay anigoo Karaamadii ummaddaa xambaarsan waan dareemayey in Shirku isidan idiinku qabsoomayo. Shirkani waa Naftaydii, inuu mar walba sidaa u najaxana waan danaynaayey. Waxaan ku dardaarmayaa Shaydaanku nin tegaya maahee, xagga damaca ha idinka soo galo, xagga dhaqashada ha idinka soo galo, laakiin Walaalnimadaa aad guniddeen ka ilaaliya. Waxa kale oo aan sidaa Salaan ay idiin soo direen Walaalladiin Habar-xabuusheed.”
Sidoo kale, Suldaan Cabdiraxmaan Jaamac Dhawal oo isaguna halkaas ka hadlay, waxa uu yidhi; “War-murtiyeedkii halkan laga akhriyey iyo qabashada shirkan Beelaha Garxajis si mug iyo miisaan leh, ayaannu u soo dhawaynaynaa, waanan idinku hambalyeynaynaa inaad madaxa is-gelisaan oo War-murtiyeedkaa quruxda badan lihi idinka soo baxa.”
Suldaan kale oo ka mid ah Salaaddiintii Madasha Shirkaas ka hadlay Shalay, waxa ka mid ahaa hadalladiisii oo uu yidhi; “Shirkoodu Cilmuu ku fadhiyaa, nabadgelyadoodana caalamka oo dhan baa eegayey. Haddaba, Beeshu hadday caynkaas tahay oo Cududdaa leedahay, waxa la doonayaa waxay ku dhawaaqaysaa inaanu fudayd noqon.”
Suldaan Cismaan Suldaan Cali Suldaan Madar, ayaa Shirkaas si rasmi ah u soo xidhay, isla markaana waxa uu u mahad-celiyey guud ahaan Madax-dhaqameedka iyo Marti-sharafta kale ee ay soo casuumeen ee xidhitaanka Shirkooda ka soo qaybgalay. “Ergooyinka, Salaaddiinta iyo Odayaasha innoo yimi ee sharafta leh aad iyo aad baan u soo dhawaynayaa, sidaad dhammaantiin Talo iyo bogaadinba noo siiseenna aad iyo aad baan idiinkaga mahad-celinayaa. Waxaanan Illaahay ka baryeyaa arrinka halkaa lagaga dhawaaqay ee reerku ka soo shirayey muddada ee idinna noogu ducayseen in Illaahay Reerka ku anfaco, Somalilandna ku anfaco.”
Madax-Dhaqameed Salaaddiin u badan oo kale oo iyaguna Shirkaas ka hadlay, ayaa muujiyey dareenkooda si la mid ah Salaaddiinta kor ku xusan, isla markaana waxay halkaas ka jeediyeen hadallo isugu jiray Duco iyo Dardaaran iyo weliba bogaadin ay ku bogaadinayeen Beesha Shirkaas qabsatay waxyaabaha wanaagsan ee ka soo baxay Shirkooda.
Shirki Beelaha Garxajis